Wararka - Doorka baakadaha alaabada
Guud ahaan, sheygu wuxuu yeelan karaa xirmooyin dhowr ah. Bacda daawada cadayga ee ay ku jirto daawada cadayga badanaa waxay ku leedahay kartoon banaanka, sanduuqa baakadaha waa in la dhigaa banaanka kartoonka si loogu qaado loona maareeyo. Baakadaha iyo daabacaaddu guud ahaan waxay leeyihiin afar shaqooyin oo kala duwan. Maanta, tifaftiraha Shiinaha Paper Net ayaa kuu geyn doona inaad wax badan ka ogaato waxyaabaha la xiriira.
Baakaduhu waxay leeyihiin afar shaqo:
(1) Tani waa doorka ugu muhiimsan. Waxay loola jeedaa in laga ilaaliyo badeecadaha la soo baakadeeyay halista iyo waxyeelada sida daadashada, qashinka, xatooyada, luminta, kala firdhinta, gogol dhaafka, hoos u dhaca, iyo midab bedelka. Inta lagu jiro mudada laga bilaabo wax soo saarka ilaa isticmaalka, tallaabooyinka ilaalinta ayaa aad muhiim u ah. Haddii baakaduhu aysan ilaalin karin waxyaabaha ku jira, baakadka noocan ahi waa guuldarro.
(2) Bixi wax ku habboon. Soo-saareyaasha, suuqleyda, iyo macaamiisha waa inay u wareejiyaan alaabada meel ka mid ah una wareegaan meel kale. Dawada ilkaha ama ciddiyaha si fudud ayaa loogu dhaqaajin karaa bakhaarka iyaga oo ku ridaya kartoono. Baakadaha khafiifka ah ee qajaarka la cuno iyo budada dharka lagu dhaqo waxaa saameeyay kan hadda yar ee lagu beddelay baakadaha; waqtigan, waa mid aad ugu habboon macaamiisha inay iibsadaan oo guryahooda u qaataan.
(3) Aqoonsiga, nooca badeecada, tirada, sumadda iyo magaca soo saaraha ama tafaariiqleyda waa in lagu muujiyaa baakadka. Baakadu waxay ka caawin kartaa maareeyayaasha bakhaarka inay si sax ah u helaan alaabada, waxayna sidoo kale ka caawin kartaa macaamiisha inay helaan waxa ay rabaan.
(4) Kor u qaadista iibinta noocyada qaarkood, gaar ahaan dukaamada is-xushay. Dukaanka dhexdiisa, baakadaha ayaa soo jiita dareenka macaamiisha waxayna u rogi kartaa dareenkiisa xiisaha. Dadka qaar waxay u maleeyaan "sanduuq kasta oo wax lagu rido inuu yahay boodh." Baakadaha wanaagsan waxay kordhin karaan soo jiidashada badeecada cusub, qiimaha baakadka laftiisu sidoo kale wuxuu ku dhiirrigelin karaa macaamiisha inay iibsadaan shey gaar ah. Intaa waxaa sii dheer, kordhinta soo jiidashada ee baakadaha ayaa ka raqiisan kordhinta qiimaha cutubka badeecada.